> Resource > Lugood > Tag Editor Bilaashka ah ee Lugood - MusicBrainz Picard
Haddii aad rabto in aad qalab si sahlan loo isticmaalo in ay si toos ah u hesho macluumaad aad heesaha oo dhan, oo ay ku jiraan artist, album, farshaxanka album, lyrics, iyo saarto heeso labalaabka maktabadda music aad. TidyMyMusic noqon doona doorashada ugu saxsan. Baro More >>
Inkastoo Lugood yimaado la tag editor dhisay-in inuu wax ka beddelo macluumaadka ee tags sida horyaalka, artist, artist album, oo matalaya, iwm,
ma ahan ku filan oo awood leh. Maqaalkani waxa uu soo bandhigi doonaa a editor free tag, waayo, Lugood songs labada Mac iyo Windows.
MusicBrainz Picard waa editor a free tag isticmaalaya MusicBrainz database caanka ah taas oo metadatabase user-hayo macluumaadka album ah. Sida tagger rasmi ah MusicBrainz, Picard soo jeedinaya in mid aad music saleysan isbedelka dhabta ah tag magaca faylka, oo semi-si toos ah loo aqoonsado gabayo aad ururinta. Waa cross-madal editor tag labada Windows, Mac iyo Linux. waxaa Download halkan.
Features Key ee MusicBrainz Picard
Iska bilaabay isaga oo intaa raaciyay files Lugood ama folder in MusicBrainz Picard on Murayaad bidix. Waxaa metadata ayaa akhrin doono ka dhammaan faylasha iyo waxay la tagged haddii ka hor, files la gelin doono "files la ekaan" folder. Markaas si fudud button Cluster riix si aad iyaga ugu ururaan galay album cusub. Ka dib markii in, jiidi oo hoos u Album in ay leeg- saxda ah, iyo hubiyo tayada ciyaarta. Haddii lagu qanco, waxaad xaq u riixi kartaa track kasta oo ay doortaan "Save" in ay qoraan metadata ilaa maktabadaha Lugood. Waxa kale oo aad dooran kartaa raad badan ku Murayaad saxda ah iyo badbaadin oo dhan isbedel ku raad.
Dooro cluster ama file iyo riix "Lookup" button in toolbar ah, Picard su'aal doonaa database MusicBrainz heli ciyaarta ugu fiican ee macquulka. Oo calanka tareenka la calanka cagaaran, casaan, ama orange si ay u muujiyaan doonaa sida dhow kulan file kasta waa in database MusicBrainz ah.
Haddii Lookup si toos ah siisaa natiijooyinka aan sax ahayn ama natiijo lahayn, dooro cluster ama fayl aad rabto in aad Lookup iyo isticmaasho mid ka mid ah "Lookup" badhamada hoose ee Picard. Waxa uu kuu furayaa website-ka MusicBrainz liiska kulan ee suurto gal ah si aad tixraac.
Picard isku dayi kartaa oo DEAD faylasha aad ku salaysan AcousticFingerprints heesaha ay. In sidaa la yeelo, dooro set oo ah files oo guji "Scan".
Aaddinta Files & Saving
Kuwan raadkaygay song ee Murayaad midig ku bilaaban doona icon ah ka dib markii database MusicBrainz u eegay, oo markii tareenka noqdaan la xidhiidha faylasha aad (by jiita iyo hoos u xaq u leeyahay), icon la isbedel mid ka mid ah kuwan soo socda:
1. laydi yar laga bilaabo cas oo doog ah ayaa muujinaya tayada ciyaar, halkaas oo casaan waa ciyaar xun oo cagaaran waa ciyaar wanaagsan
2. A-xagalka baadi cas oo ka dhigan tahay Picard kulantay qalad ah.
3. A Calaamad cagaar ah ayaa muujinaya wadada uu yahay mid casriyeeysan oo badbaadiyey maktabadda Lugood. Waxaad ka arki kartaa in Lugood. Haddii aan, cusboonaysiiso info maraya Hel amarka Info.
Digniin : HA xoojin maktabadda dhexe ee isticmaalaya MusicBrainz Picard, waa maktabadda xoojinta la sameeyo ka hor ama ka dib.
Download MusicBrainz Picard Xaqa Hadda